ယဉ်တကိုယ်မယ်: October 2009
ရှောင်မည်ရှားမည် ဂျူရီဂျူတီ (Jury Duty)
အမေရိကန်တိုင်းပြည်ရဲ့ တရားရေးစနစ်မှာ ပြစ်မှူကျူးလွန်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော တစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့တစ်ခုကို တရားစီရင်ရာမှာ ဂျူရီ (Jury) စနစ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီစံနစ်ဟာ တရားသူကြီးနဲ့ ဂျူရီလူကြီးများ (Jurors)ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ပြစ်မှူ (သို့မဟုတ်) တရားရုံး အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဂျူရီလူကြီးများရဲ့ အရေအတွက်ဟာ ၆ယောက်မှ ၁၂ယောက်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဖြူတုတ် အသေးစိတ် မရေးနေတော့ပါဘူး။အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်း ဂျူရီလူကြီးအဖြစ် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်တချို့တော့ ရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်း နားလည် ပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ စိတ်နဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းချက်မရှိရခြင်း၊ မှူခင်းမှူရာ ကင်းရှင်းရခြင်း အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဂျူရီလူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် အလုပ်လျှောက်ရတာမျိုး အင်တာဗျူးသွားရတာမျိုး မလိုအပ်ပါဘူး။ ပြစ်မှူတစ်ခုကို စစ်ဆေးဖို့ရှိလာရင် တရားသူကြီးရဲ့ လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ရှေ့နေက အဲဒီသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီနိုင်သော သူများကို မဲပေးသူများစာရင်း (သို့မဟုတ်) ကားမောင်းလိုင်စင် ရှိသူများစာရင်းမှ randomly ဆင့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆင့်ခေါ်ခံရသူများကို အရည်အချင်းစစ် မေးခွန်းများ ဖြေဆိုခိုင်းပြီး အောင်မြင်သူများကို ဂျူရီလူကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူအဖြစ် လျာထားပါတယ်။ လျာထားသူတွေထဲကမှတခါ ဂျူရီလူကြီးအဖြစ် randomly ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်စေ တရားရုံးမှာ အချိန်ကုန်လူပန်း ဖြစ်ကြရတာကို မနှစ်သက်သူများပါတယ်။ လူအများစုကတော့ ဆင့်ခေါ်စာရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက ဒီတာဝန်ကနှုတ်ထွက်ခွင့်ရအောင် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံ ပေးကြတော့တာပါပဲ။ အချို့တရားရုံးတွေမှာတော့ ဂျူရီတာဝန်ကနေ လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်များကို ကြေငြာထားပါတယ်။ အသက်၇၀ကျော်နေရင်၊ ၂နှစ်အတွင်း ဂျူရီတာဝန် ထမ်းဆောင်ထားရင်၊ မီးသတ်သမားလုပ်အားပေး (သို့) ကယ်ဆယ်ရေးသမား (သို့) လူနာတင်ယာဉ် ကူညီရေးအဖွဲ့ အသင်းဝင်အဖြစ် volunteerလုပ်နေရင် စာတင်ပြီး excuseပေးအောင် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဖြူတုတ်ဒီလို နိဒါန်းပျိုးနေရခြင်း အကြောင်းကတော့ တနေ့မှာ ဖြူတုတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ဆင့်ခေါ်ခံရပါရော။ အဲဒီမှာ သူကဘယ်လိုအကြောင်းပြချက် ပေးသင့်သလဲလို့ တိုင်ပင်လာပါတယ်။ (ဖြစ်ချင်တော့ သူက အထက်ပါအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီနေဘူးလေ။) ဖြူတုတ်ကလဲ ကြံရဖန်ရတော့မယ်ဆိုရင် သိပ်အဖြစ်မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ လက်စွဲတော် Googleထုံးကို နှလုံးမူလိုက်ရာမှာ အောက်ပါ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကလေးတချို့ကို တွေ့ရှိမှတ်သားရပါတယ်။ အခုပြောမဲ့ (၈)ခုလောက်ကတော့ ဖြူတုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေတယ်။ စာဖတ်သူများ စိတ်ဝင်စားမလားမသိဘူး။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 8:00 PM9comments:
ဒီ Singforyou.net ဆိုတဲ့ Site ကလေးကို ညီမလေးတစ်ယောက်ဆီက ရထားတာကြာပါပြီ။ ဒီလောက် လုပ်ရတာ လွယ်ကူတယ် မထင်တဲ့အတွက် ဖြူတုတ် Procrastinate လုပ်နေတာ နှစ်နဲ့တောင် ချီလောက်ရောပေါ့။ ဒီနေ့တော့ မိုးအေးအေးလေးမှာ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အိမ်မှာပဲ ကာရာအိုကေ ဆိုမလား စိတ်ကူးရာကနေ Blog ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျကျနန အသုံးချပြီး စာဖတ်သူတို့ကို နှိပ်စက်ဖို့ အခုလိုလုပ်ရန် အကြံရရှိသွားခြင်းပါ။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 6:48 PM 14 comments:
မနေ့က Tag Post ရဲ့အဆက်လေးပါ။ ဒီတခေါက်တော့ မြန်မာလိုလေးပေါ့နော်။ ယဉ်တကိုယ်မယ်ဆိုတော့ 'ယ' ပေါ့။ စာဖတ်သူတို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် စလိုက်ကြရအောင်။
နာမည်က... ယဉ်တကိုယ်မယ် လို့ခေါ်တွင်ပါတယ်
ပြောချင်တဲ့စကားလေး လေးလုံးက... ယဉ်ကျေးလိမ္မာ
လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က... ယဉ်ကျေးမှူကို ထိမ်းသိမ်းချင်ပါတယ်။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 11:02 PM6comments:
'Y' for Yintakomae
ဆုမွန် Tag လုပ်သွားတာပါ။ ဖြူတုတ်ရဲ့ ပထမဆုံး Tagမို့ super excited ဖြစ်ရပါတယ်။ ဖြူတုတ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို 'ဖြူတုတ်'လို့ နာမ်စားသုံးသော်လည်း ဆုမွန်က 'ယဉ်တကိုယ်မယ်' အဖြစ် Tag တဲ့အတွက် ဖြူတုတ် 'Y' နဲ့ 'ယ' ကို သုံးပါရစေ။ ဆုမွန်နဲ့ စာဖတ်သူအားလုံး နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖြူတုတ်စပြောတော့မယ်နော်...
1. What is your name : YinTaKoMae
2. A four Letter Word : Year
3. A boy's Name : Yan Aung
4. A girl's Name : Yadanar Pon
5. An occupation : Yale Professor
7. Something you'll wear : Yankee Hat
8. A food : Yogurt
9. Something found in the bathroom : Yves Saint Laurent Toner
10. A place : Yellowstone
11. A reason for being late : You
12. Something you'd shout : Yummy
14. Something you drink : Yakult
15. A musical group : Ying Yang Twins
18. A type of car: Yogo
19. The title ofasong : You Are Not Alone
20. A verb : Yield
ဖြူတုတ် 'ယ' ကိုပါ တခါတည်း တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးပေမဲ့လည်း နဲနဲခက်နေလို့ နောက်နေ့ကျရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 5:14 PM6comments:
ဖြူတုတ်တင်ချင်တဲ့ ပို့(စ်)ကအသစ်လေးက မှန်းထားတာထက် ပိုကြန့်ကြာနေတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဖြူတုတ်ပြင်လေ ပိုမှားလေ၊ ပိုဖတ်လို့မကောင်းလေ။ ကိုယ်တောင်မကြိုက်မှတော့ စာဖတ်သူတို့အတွက် အဆင်ပြေဖို့ ဆိုတာကတော့ ဝေလာဝေးပေါ့။ အဲဒါနဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ဖြူတုတ်ရဲ့ Collection ဓာတ်ပုံလေးများကို ဟိုဟိုဒီဒီ ပြန်ကြည့်မိရင်းနဲ့ ဒီPostလေးကို ကြားဖြတ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Collection ဆိုပေမဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလို တောင်ရောက်မြောက်ရောက် download လုပ်ထားယုံပဲရှိတာ။ ဆိုတော့...သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီး နောက်ခံသီချင်းလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံအယ်(လ)ဘမ်လေး လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့။ လုပ်ရင်းနဲ့ စိတ်ကတော်တော်လေး ပြန်ကြည်လင်လာပါတယ်။ အစစအဆင်ကိုချောလို့။ ရွေးထားတဲ့ သီချင်းအရှည်နဲ့ ဓာတ်ပုံအရေအတွက်ကလဲ ကွက်တိပဲ။ Preview လည်း ကြည့်ပြီးပြီ။ အကုန်အဆင်ပြေတယ်။ Post လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ အဲဒီလောက်တောင် ရှောရှူနေရင်တော့ သိပ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ဖြူတုတ် တစ်ခုခုလုပ်တိုင်း (ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ) အဖုအထစ်လေးတွေ ရှိတတ်တော့လေ။ တွေးလို့မှမဆုံးသေးဘူး Bloggerမှာ ဗွီဒီယိုတင်လို့ မရတာကိုသွားတွေ့တယ်။ ကဲပါလေ ဖြူတုတ်ရဲ့ ညည်းချင်းနဲ့ ရှည်မနေတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ YouTube မှာတင်လိုက်ပြီး လင့်(ခ)လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြူတုတ်နဲ့ အကြိုက်ချင်း တူကြလားဟင်? အခုရွေးထားသူတွေက များသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ရုပ်ကို ကြိုက်တာပါ။ အရည်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်သက်မိသူတွေ သတ်သတ်ရှိပါတယ်။ နောက်တခေါက် ပေါ့နော်။ ဒီမှာ ရှုစားလိုက်ပါအုံး။
ဒါနဲ့လေ မဆုမွန်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် Tag ခြင်းရဲ့သဘောသဘာဝကို ဖြူတုတ်နားလည်သွားတယ်။ ဒီ Post အတွက် ဖြူတုတ်ကို ဆက်ရေးပေးစေချင်သူများကတော့ မဆုမွန်၊ Rita၊ ကြည်ဖြူပိုင် နှင့် ခရေညို တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားတဲ့အခါပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဖြူတုတ်စောင့်ဖတ်နေမယ်လို့ ပြောပါရစေ။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 12:58 AM 10 comments:
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး စာဖတ်သူတို့တော့ ဖြူတုတ်လေး 'ဘူးယို'ကိုဘယ်လို လုပ်ပါလိမ့်ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားကြမလား မသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားသူများရှိရင် ဖြူတုတ်လေးက မနှမြောတတ်ပါဘူး။ နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးလိုစိတ် အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဆရာစားချန်လိုစိတ် နည်:ပါးပုံများဆိုရင် ပြောရအုန်းမယ်... ကိုးတန်းတုန်းက သချာင်္ နဲ့ဓာတုလာလာမေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို စာရှင်းကောင်းတာ ပထအစမ်းအမှတ်စာရင်းလဲထွက်ရော သူကကိုယ့်ထက် အမှတ်သာသွားလို့။ ဖြူတုတ်ကတော့ ကိုယ်ရှင်းပြလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ သိပ်ဂုဏ်ယူတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းက လာကျေးဇူးတင်တော့လည်း တပြုံးပြုံးနဲ့။ အိမ်ရောက်တော့မှ မိုးမွှန်အောင် အဆူခံရတာ။ ထုံလို့တဲ့။ (ဟုတ်တယ်... စာပြိုင်တဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေကတော်တော်ရယ၊် မိဘတွေ စိတ်အားထက်သန်ပုံများ စာမေးပွဲဝင်မဖြေယုံတမယ်ပဲ။) ဖြူတုတ်ကတော့ အမှတ်သည်းခြေမရှိပါဘူး။ စာလာမေးသူရှိတိုင်း ဖြေမြဲပဲ။ ကောင်းတာလုပ်တာပဲဟာနော့။ အခုတော့ ကျောင်းသားဘဝက လွန်မြောက်ပြီး အလုပ်ခွင်ဝင်လာပြီဆိုတော့ အဲဒီအကျင့်ကို ကြိုးစားပြီးပြုပြင်နေရတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်လေးတွေ ရှိတာကိုး။ ကိုယ့်ရဲ့ Approachကို ကိုယ့်ရဲ့Collegueနဲ့ Shareလုပ်လို့မှ မဖြစ်တော့ပဲလေ။ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကနေ သွေထွက်သွားပြန်ပြီ။ ပြန်ဆက်ရရင်... အရာရာကို အသေးစိတ် 'က'ကြီးကနေ 'အ'အထိ တင်ပြချင်တတ်တဲ့ ဖြူတုတ်ရဲ့ အကျင့်အတိုင်း စာဖတ်သူ သိချင်နေတဲ့ 'ဘူးယို' ဘယ်လိုစဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကနေ စလိုက်ကြရအောင်လား။
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 10:13 PM4comments: